Wasaaradda Arrimaha Gudaha Puntland oo amaro u dirtay Degmooyinka Puntland • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Wasaaradda Arrimaha Gudaha Puntland oo amaro u dirtay Degmooyinka Puntland
Wasaaradda Arrimaha Gudaha Puntland oo amaro u dirtay Degmooyinka Puntland
December 28, 2012 - By: Abdirizak Shiino
Cali Xoosh Wasiir ku xigeenka Arrimaha Gudaha.
Warar Horseed Media soo gaaray ayaa sheegaya in Wasaarada Arrimaha Gudaha ay amar ku siisay guddoomiyaasha degmooyinka Puntland inay magaalo walba oo ka tirsan aan wax kulan siyaasad ah lagu qaban karin illaa amar danbe oo kasoo baxa Dowlada Puntland.
Guddoomiyasha Gobalada iyo Degmooyinka ee Puntland ayey horey dowladu u sheegtay inay dhamaantood xubno ka yihiin Xisbi Xaakimka Madaxweyne Faroole uu hogaamiyo.
Amarka Wasaarada kasoo baxay ayaa sheegaya inuu ku saxiixan yahay Wasiir kuxigeenka 2aad ee Wasaarada Arrimaha Guddaha Cali Yuusuf Cali (Xoosh) oo la sheegay in dhawaan loo magacaabay Siihayaha Xilka Wasiirka Arrimaha Gudaha.
Horey ayey u jireen amaro kasoo baxay Guddoomiyaasha gobalada Bari iyo Nugaal oo amaro lagu siiyey ganacsatada magaalada Bosaaso iyo Garowe in xarumahooda ama Hoteladooda aan lagu qaban karin wax shir ah oo siyaasad khuseeya, amarkaasi ayaa hada u muuqda in Wasaaradu kusii faafineyso deegaanada kale ee Puntland.
Cali Xoosh oo ah Wasiir kuxigeenka 2aad ee Arrimaha Gudaha D/hoose & Horumarinta Reer Miyiga ayaa isagu dhawaan la wareegay guud ahaan hawlada Wasaaradda xili uu dalka ka maqan yahay Wasiirka Arrimaha Gudaha Cabdulaahi Axmed Jamaac (Ilkajiir).
Qaar kamid ah Shaqaalaha Wasaaradda ayaa Horseed Media u xaqiijiyey in qoraal kasoo baxay xafiiska Madaxweynaha lagu qeexay in Cali Xoosh uu yahay kusimaha Wasiirka ahna sii hayaha xilka Wasaarada. Waxaana qoraalkaasi lagu sheegay in ay lagama maarmaan tahay in la dardar geliyo shaqadii Wasaaradaas oo mudooyinkii u danbeeyey habac dhanka maamulka ahi soo galay Madaxweynuhu wuxuuna go’aansaday in si ku meel gaar ah xilkii Wasaaaraddaas loogu sii dhiibo Cali Yuusuf Cali (Xoosh).
Arrintan ayaa la rumeysan yahay inay soo baxday kadib markii Wasaaradda Arrimaha Gudaha oo Dowladda wakiil uga ah Gobolada, Degmooyinka & Odayaasha dhaqanku ay ka gaabisay inay wax ka qabato shirarka ka curtay qaybo ka mid ah Puntland.
Wuxuu xusay in Madaxweynuhu ka carooday kadib markii Wasaaradu ku guuldaraysatay Nabadoonada ka diiwaan gashan inay ka hor istaagto inay qabtaan shirar looga soo horjeedo maamulka.
Kala Argti duwanaan.
Ilkajiir Wasiirka Arrimaha Gudaha.
Warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya inay Madaxweynaha & Wasiirka Arrimaha Gudaha Gen.Ilkajiir ay ku kala aragti duwan yihiin xaaladaha siyaasadeed ee wakhtigan ka taagan Puntland sida ay tahay in Dowladu u maarayso.
9 Oct, 2012 ayaa Madaxweynaha Puntland wuxuu kala diray maamulkii Gobolka Sanaag isagoo u magacaabay saraakiil cusub talaabadaas oo si weyn uga caraysiisay Wasiirka Arrimaha Gudaha oo laga soo xigtay in aan lagala tashan Go’aanka Madaxweynaha.
Wasiirka Ilkajiir oo hada mudo ka badan 3 bilood ku maqan Dalka dibadiisa sabab la’aan xili Dalku ku jiro xaalad xasaasi ah ayey shaqaalaha Wasaarada oo Horseed Media la hadlay ku sheegeen inay filayaan inay la xariirto kala aragti duwanaanta u dhexeysa Wasiirka iyo Madaxweynaha.
Mid ka mid ah Saraakiisha Wasaaradda oo ka gaabsaday in magaciisa la shaaciyo ayaa yiri:
“Go’aanka Madaxweynaha awooda dheeraadka ah u siiyey Cali Xoosh ma keeni doonto isbedel sidaa u weyn waayo Cali xoosh awalba isagaa ku shaqayn jiray xilka Wasiirka” ayuu yiri.
Dhanka kale isla maanta ayaa lagu soo waramayaa in Degmada Qardho maamulkeeda lagu wargeliyey in ay si deg deg ah tilaabo uga qaadaan Nabadoonada ku sugan magaalada Qardho, amarkan kasoo baxay Wasaarada Arrimaha Gudaha iyo Madaxtooyada ayaa loogu sheegay maamulka degmada in Qardho aan lagu qaban karin shir siyaasadeed ama mid ay dhigtaan Nabadoonada (Dhaqan) oo aysan dowlada fasixin.
Arrintan ayaa la sheegay inuu murran xoogan ka dhex dhaliyey Degmada Qardho maamulkeeda, waxayna Odayaasha ku sugan magaalada Qardho Horseed Media u xaqiijiyeen in Guddoomiye kuxigeenka degmada Qardho Cabdirisaaq Cali Cartan (Sanweyne Cabaade) uu maanta codsaday in Nabadoonada ka yimid gobalka Bari inaysan ka qeyb geli karin wax shir ah oo magaalada ka dhaca oo aysan dowlada fasixin.
Balse waxay odayaasha Qardho sheegeen in aan loo cago jugleyn karin Nabadoonada hada kusugan magaalada Qardho.
“…Falalka ay dowladu isku dayeyso waa kuwo soo dadajinaya inay shacabka iyo dowlada isku dhacaan nimanka maamulka laga yeeli maayo inay wadanka sidey doonaan ka yeelaan, hadii ay ku kacaa wax ka horimaanaya dhaqan iyo sharafta shacabka waanu iska qabaneynaa wixii noola yimaada wax sharciga ka baxsan….” ayuu yiri mid kamid ah odayaasha magaalada Qardho oo arrintan aanu wax ka weydiinay sida ay u arkaan.
Nabadoonada magaalada Qardho ayaa shalay (Khamiis) qado sharaf Hotel Gufure ee magaalada Qardho ugu sameeyey Nabadoonadii dhawaan kasoo noqday magaalada Garowe iyo kuwii horey loogu diiday inay magaalada galaan ee kasoo jeeda gobalka Bari.